မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်၊ မတ္တရာသူဌေးကျောင်း ရွှေကျင်နိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌ တွဲဖက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆရာ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဇွန် ၂၃- မန္တလေးအ ထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ နှလုံး အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်အခန်း အမှတ်(၁၁ဝ)တွင် တက်ရောက်ဆေး ဝါးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိသော မဟာ အောင်မြေမြို့နယ်၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ တိုက်သစ်၊ မတ္တရာသူဌေးကျောင်း ဆရာတော်ရွှေကျင်နိကာယ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တွဲဖက်ရွှေကျင်သာသနာ ပိုင်၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာ ဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ ဘဒ္ဒန္တမာနိတသိ ရီဘိဝံသဆရာတော်ကြီး (သက်တော် ၈၄ နှစ်၊ ဝါတော် ၆၃ ဝါ)သည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇွန် ၂၃ရက်(၁၃၈ဝခု၊ ပထမ ဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက်) စနေနေ့ နံနက် ၃ နာရီခွဲခန့်တွင် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဆရာတော်ကြီးကို မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မတ္တရာ မြို့နယ်၊ ကောက်ရိုးပုံကျေး ရွာနေ ခမည်းတော်ဦးထွန်းအေးနှင့် မယ်တော်ဒေါ်ပါတို့မှ ၁၂၉၆-ခုနှစ် တ ပေါင်းလပြည့်ကျော်(၃)ရက်တွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ရာ ငယ်မည်မှာ မောင်စိန်ရဖြစ်ပြီး ၁၃ဝဝ ပြည့်နှစ် သက်တော်သုံးနှစ်ကျော် လေးနှစ်၌ ကောက်ရိုးပုံရွာကျောင်းတိုက်ဂိုဏ်း အုပ်ဆရာတော်ကြီး ဥူးတေဇဝန္တထံ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အခြေခံစာပေ တို့ကိုသင်ယူတော်မူခဲ့သည်။
၁၃ဝ၄ ခုနှစ်သက်တော်ရှစ်နှစ် ၌ကောက်ရိုးပုံရွာလယ် ဆရာတော် ဥူးဝဏ္ဏ၏ဝတ်ရုံကျောင်းသို့ ပြောင်း ရွှေ့ကာအခြေခံစာပေများကို သင် ယူခဲ့ပြီး ၁၃ဝ၅ ခုနှစ်သက်တော် ကိုးနှစ်၌ စဉ့်ကူးမြို့နယ်ညောင်ပင် ရွာမဇ္ဈိမာရုံကျောင်းဆရာတော် အရှင်ဣန္ဒာစရိယအထံသို့ မိမိဆန္ဒ အလျောက်ပြောင်းရွှေ့ကာ ပရိယတ် စာပေတို့ကို သင်ယူခဲ့ကာ ၁၃ဝ၇ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလ၌ မိဘနှစ် ပါး၏ပစ္စယာဖြင့် ရှင်သာမဏေအ ဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကာ ဘွဲ့တော်မှာ ရှင်မာဃဝဖြစ်သည်။
၁၃၁၃- ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ကျော် (၁ဝ) ရက်၌ မန္တလေး မြို့မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်ဝါဆို ကျောင်းဆရာတော်စုဒ္ဒသမရွှေ ကျင် သာသနာပိုင်ဘအို၏ ခြေတော်ရင်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၃၁၅ ခုနှစ်၌ အ စိုးရပထမငယ်တန်းကိုလည်းကောင်း ၁၃၁၆ ခုနှစ် ဝါခေါင်လပြည့်နေ့၌ မန္တလေးမြို့မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက် သစ်ဗဒ္ဓသိမ်တွင် နဝမရွှေကျင်သာ သနာပိုင်အဆီမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ စံကင်း ဆရာတော်ကြီးကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုလျက် မိဘနှစ်ပါးနှင့် ဇယမေဒနီဝါဆို ဆရာတော်၏ မယ်တော်ကြီးအဖွား တွယ်တို့၏ပစ္စယာနုဂ္ဂဟာကို ခံယူ ကာမြင့်မြတ်သော ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ၍ ထိုနှစ်မှာပင် အစိုးရအ လတ်တန်းကိုလည်းကောင်း၊ ၁၃၁၈ ခုနှစ်၌ အစိုးရအကြီးတန်းကိုလည်း ကောင်း၊ ၁၃၁၉- ခုနှစ်၌ စာချတန်းစာ မေးပွဲကို မဇ္ဈိမနိကာယဝိဘဂါဒီဂုဏ် ထူးတို့ဖြင့်လည်းကောင်း အောင်မြင် ခဲ့သဖြင့် သာသနဓဇသိရီပဝရဓမ္မာစ ရိယဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ၁၃၂ဝ ပြည့်နှစ် မှစ၍ တပည့်စာသင်သားတို့ကို လည်း စာပေပို့ချခဲ့ရာ အထူးအား ဖြင့် အလင်္ကာကျမ်း၊ ဝုတ္တောဒယ ဆန်းကျမ်း၊ ကင်္ခါဝိတရဏီအဋ္ဌက ထာနှင့် ဋီကာကျော်တို့ကို ပို့ချခဲ့ပြီး ထိုစဉ် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်စည် ရှင်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော် မူသော ပြည်မြို့ဝိသုဒ္ဓါရုံဗာရာဏသီဆရာတော်အရှင်အာနန္ဒပဏ္ဍိ တထံတော်၌ သက္ကတနီတိကျမ်းကို သင်ယူခဲ့ကာ ၁၃၂၈ ခုနှစ်၊ သီတင်း ကျွတ်လမန္တလေးမြို့လူထုသတင်းစာတွင် ကထိကရဟန်းကလောင် အမည်ဖြင့် မြန်မာအက္ခရာသရ-ဗျည်းရောယှက်လျက်ရှိခြင်း ဆောင်း ပါးကိုပထမဆုံး ရေးသားခဲ့သည်။
၁၃၃ဝ ပြည့်နှစ်၊ တန်ခူးလ ဆုတ် ၇ ရက်၌ စစ်ကိုင်းမြို့ကြခတ် ရွာဦးရှိ ကြခတ်ကျောင်း (သုမနာရာ မ)ကိုလက်ခံ၍ကျောင်းဘုန်းကြီးအ ဖြစ်ရှစ်လကျော်ကျော် သာသနာပြု ခဲ့ပြီး ထိုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် (၁)ရက် ဇဃမေဒနီဝါဆိုကျောင်း သံဃာတို့က စံကင်းဂုရုပ္ပတ္တိကျမ်းရေး သားရန် အဖွဲ့တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရာ အဖွဲ့က ထိုစာအုပ်ရေးသားရန်တာ ဝန်ကို ကြက်ကျောင်းဘုန်းကြီးမာန် တနှင့် စစ်ကိုင်းသုဗောဓာရုံတိုက်စာချဘုန်းကြီး အရှင်နန္ဒမာလာဘီတို့ နှစ်ပါးအား တာဝန်ပေးအပ်ခံရခြင်း မှစတင်၍ ဆရာတော်ကြီးသည် ၁၃၆၅ ခုနှစ်အထိ စာပေကျမ်းဂန်တို့ကို လေ့ လာဆည်းပူးရေးသားပြုစုခဲ့သည်။
၁၃၄၂ ခုနှစ်တွင် ဒွါဒသမသာ သနာတော်လုံးဆိုင်ရာ ရွှေကျင်နိ ကာယသံဃာ့အစည်းအဝေးကြီးက ဂိုဏ်းလုံးဝန်ဆောင် နာယကအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံသံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွင်လည်း မန္တလေး အနောက်တောင်မြို့နယ် ရွှေကျင်နိ ကာယသံဃနာယကအဖွဲ့၏ အကျိုး ဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၃၅၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာ နာ ယကအဖွဲ့ ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၃၅၇ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဝိနည်းဓိုရ် တာဝန် ကိုလည်းကောင်း ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ”မဟာဂန္ထဝါ စကပဏ္ဍိတ”ဘွဲ့တံဆိပ်ကိုလည်း ကောင်း၊ ၁၃၅၉ခုနှစ်တွင် မန္တလေး မြို့၊ ပရိယတ္တိသာသနဟိတအသင်း ကြီးက ”ဘဒ္ဒန္တမာနိတသိရီဘိဝံသ ပရိယတ္တိသာသနဟိတမူလဓမ္မာစ ရိယ”ဘွဲ့တံဆိပ်ကို လည်းကောင်း။ ၁၃၆၁ ခုနှစ်တွင်အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါ စကပဏ္ဍိတဘွဲ့တံဆိပ်ကိုလည်း ကောင်း၊ ၁၃၆၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရကအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဘွဲ့တံ ဆိပ်ကိုလည်းကောင်း ဆက်ကပ်ခံ ခဲ့ရပြီး ၁၃၇၆ ခုနှစ်တွင် ဧကူနဝီသ တိမသာသနာတော်လုံးဆိုင်ရာ ရွှေ ကျင်နိကာယ သံဃာ့အစည်းအဝေး ကြီးကရွှေကျင်နိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌ မဟာနာယက (တွဲဖက်သာသနာ ပိုင်)အဖြစ် တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။
၁၃၄၄ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ် သူဌေးတန်း ကျောင်းကို ကျောင်းဘုန်းကြီးအဖြစ် သာသနာပြုရပြီး ၁၃၆၆ ခုနှစ်တွင် သူဌေးတန်းကျောင်းကို မတ္တရာသူ ဌေးကျောင်းဟု သာသနာပိုင်ဝါဆို ဆရာတော်ကြီးက ပြောင်းလဲမှည့် ခေါ်စေခဲ့သည်။
ဆရာတော်ကြီးသည် သက် တော် (၈၄) နှစ် သိက္ခာတော် (၆၄) ဝါတွင် နှလုံးပိုးဝင်ရောဂါဖြင့် မန္တ လေးအထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံ ကြီးနှလုံးအထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် တွင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူစဉ် ပျံလွန် တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆရာတော်ကြီး၏ ဈာပန အတွက် ဇွန် ၂၃ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ က ဈာပနကျင်းပရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဆရာတော်ကြီး၏ြ<ွကင်း ကျန်ရစ်သော ဥတုဇရုပ်ကလာပ်တော် ကို ဇွန် ၂၉ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ တွင် ဧရိပ်ငြိမ်သုသာန်သို့ အန္တိမ အဂ္ဂိဈာပနဆင်ယင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြဲသဘျ ၏ပြပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး တက်ရောက်ခဲ့သော်လ
၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ပြည့်တန်ဆာဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွ??
တရားမဝင်လုပ်သားများကို စီမံချက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးမည်ဟု သတိပေးထားသည့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင
ပရိသတ်ရှေ့တွင် အမျိုးသမီးကို နမ်းသော ဒူတာတေ ဝေဖန်ခံရ
တောင်ပြုန်းပွဲတော် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းကြီး ကိုးမျိုးအနက်မှ ခြောက်မျိုးကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစ